विरामी निशालाई भेट्दा आँचल शर्मा स्तब्ध ! धेरै पछि भेट्दा देखियो नसोचेको परिवर्तन – Kavrepati
Home / समाचार / विरामी निशालाई भेट्दा आँचल शर्मा स्तब्ध ! धेरै पछि भेट्दा देखियो नसोचेको परिवर्तन
विरामी निशालाई भेट्दा आँचल शर्मा स्तब्ध ! धेरै पछि भेट्दा देखियो नसोचेको परिवर्तन
admin June 14, 2021	समाचार Leaveacomment 132 Views
अंचल शर्मा एक चर्चित अभिनेत्री हुन । उन्ले धेरै फिल्म र म्युजिक भिडियो खेलेको छ । उन्ले भिडियो र फिल्म हरु दर्शक स्रोता ले धेरै मन पराएको छ । आज भने अंचल शर्मा निश लाई भेट्न हस्पिटल पुगेको छ । उन्ले निसा लाई भेटे पछी एस्तो कुरा गरेको छ । आउनुश हेरै यो भिडियो जुन भर्खरै सार्बजनिक भएको छ ।
कुनै बेला चमकधमक रहेको उनको जिन्दगी अहिले बेसहारा काठमाडौं । नेपाली कला क्षेत्रमा जम्दै गरेको एउटा नाम हो निशा घिमिरे । कुनै बेला चमकधमक रहेको उनको जिन्दगी अहिले बेसहारा बनेको छ । निकै नै दयनीय अवस्थामा उनलाई देख्न सकिन्छ । उनको अहिलेको यो अवस्था देख्दा निस्शब्द नुहने सायदैं होलान् ।
Previous पाथिभरा माताले हामी सबैको रक्षा गरुन, जेष्ठ ३१ गते सोमबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
Next असार १ गते देखि पसलहरु खुल्ने, निषेधाज्ञा यथावत